Zanu (PF) yakafanana ne Rhodesian Front - The Zimbabwean
Zanu (PF) yakafanana ne Rhodesian Front
Zanu (PF) ibato rinosvoropodza vanoripikisa sezvimbwasungata zvenyika dzekumavirira. Asi kana munhu akatarisisa unonyatsakuona kufanana kwevakuru veZanu (PF) nevaimbotungamira Rhodesia Front.
Mapato maviri aya anekushandisa mhirizhonga kusinga kahadze. Nhasi uno muZimbabwe makwikwi aripo pakati pevaviri ava kuti nderipi bato ringatore mukombe wekushaiwa ganda kumeso.
Zanu (PF) ne Rhodesian Front dzino ratidza kusvora kutonga kweveruzhinji. Mashandisiro anoitwa mauto kuitira kuti varambe vachitonga aripachena semutyairi wetirakita.
Mumazu e Rhodesia kwainge kuine rusarura ganda mumararamiro evanhu, kutongwa kwenyika, kuva nevhu, kuenda kuchikoro nemunobuditswa nhau. Zanu (PF) yakakwanisa kuenderera mberi ichi shandisa matongero eRhodesia Front.
Mabazi aitonga zvineutsinye akangonhadziridzwa muna 1980. Zanu (PF) yakatoenderera mberi nekushandisa chisimba sezvaiitwa munguva yeRhodesia, pane dzimwe nguva ichipfuura nguva yeRhodesia.
Mukuburitswa kwemashoko Rhodesian Broadcasting Corporation (RBC) wakatsividzwa ne Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) iyo yaishanda nemutemo we Rhodesia Broadcasting Act kusvika muna 2001 apo pakazoiswa Broadcasting Services Act. Asi uku kwaingova kushandurwa kwezita mitemo, iyi nanhasi yakangofanana, hurumende ndiyo ichine simba pamasaisai, ichishandisa umbimbindoga uhwu kuitira kuti irambe ichitonga nekusvoropodza vanopikisa.
Mumapepa nhau mapepa akaita se Herald, Chronicle aimbenge achidzi Rhodesian Herald ne Rhodesian Chronicle achiri kuenda mberi achishandira Zanu (PF) sezvaaimboita panguva yeRhodesia achishandira Rhodesian Front.
Mitemo yakaita se Access to Information and Protection of Privacy Act (AIPPA), uyo wakagadzirirwa kuita mhosva kuburitswa kwamashoko inoratidza kuti Zanu (PF) inoda kutonga kwesimba nekuvhara kubudiswa kwamashoko.
Mu ZBC nekumapenhau arimumaoko ehurumende, Zanu (PF) sezvaingoitwa ne Rhodesian Front yakaisa zvimbwasungata zvawo, vanhu vasinganyare kutaura manyepo. Vashandi veZanu (PF) avo vano nyepedzera kuita kunge nyanzvi munezvekutongwa kwenyika vanonyadzisa zvokuti havana musiyano nevaishanda panguva yeRhodesia avo vavai rwisa.
Munezveupfumi vanoda kubudirira vanotozembera Zanu (PF) sezvaiitwa panguva yekutonga kwavachena. Muenzaniso ndeye chikamuchokupa upfumi kuvanhu che Indegenisation icho chichapfumisa avo vane mikoto muZanu (PF) nevaripamusoro musangano iri.
Chirongwa chekugovera vanhu ivhu kunyangwe hazvo wava mutemo muedzaniso mukuru yekutora zvine nhafu zvinoitwa ne bato reZanu (PF) ichipa zviwanikwa munyika kune avo vano tsigira bato iri, sezvakaitwa panguva yeRhodesia apo vaitungamirira kupambwa kwenyika neshamwari nehama dzavo vakawana ivhu.
Nhasi uno kana munhu akabuda muZanu (PF) minda yavo inobva yatorwa. Zanu (PF) inoshandisa nyaya yeganda sezvaingoitwa panguva yeRhodesia. Pakuyana rusununguko muna 1980 Zanu (PF) yakaisa vanhu vanoitsigira muhurumende. Mashandiro anoita vanochengetedza runyararo anoratidza izvi.
Sezvaitwa neRhodesian Front, hurumende yeZanu (PF) inota zvizvarwa zveZimbabwe nekudze kwemaoko. Vanochengetedza runyararo vanoshandira Zanu (PF), ndokusaka vakuru vemauto vachiti vanotsigira bato reZanu (PF). Sekuurayi kwakaitwa vanhu paFreedom Camp, Nyadzonia, Chomoio, Tembwe, nekusungwa kwevakawanda paSikombela, Hwahwa, Goromonzi, Khami and Gonakudzingwa nemitemo wakaita seLaw and Order Maintenance Act, the Official Secrecy Act, ne humhondi hwe mauto e Selous Scouts, Special Branch ne evatsori veRhodesia muZimbabwe nhasi Zanu (PF) ine kutonga kwakadai.
Vasori venyika vanonzi maCIO vakabva muRhodesia. Mabasa avo ndeemuchihwande. Hapana mutemo wavanotevera asi vanoenda kumukuru yeZanu (PF) vaRobert Mugabe.
Munguva yeRhodesia vanomirira kodzero yevanhu nevaipikisa vaibatirirwa izvi zvichirikuitika nanhasi uno.
Nanhasi Zanu (PF) ichiri kushandisa mutemo we Law and Order Maintenance Act (LOMA), mutemo wakaiswa nevatongi veRhodesia vachiedza kunyaradza voruzhinji, vanhu vatema.
Nekuda kwemutemo uyu vanu vakawanda vakasungwa vazhinji vakaoneswa pfuvhu.
Muna 2001mutemo uyu wakashandurwa wapihwa zita rokuti Public Order and Security Act (POSA) nhasi uno uri kushandiswa neZanu (PF) sezvawaimboitwa neRhodesian Front.
Zita chete ndiro rakashandurwa asi nanhasi mutemo uyu uchiene hudzvanyiriri sehwe LOMA. Mutemo uyu unopa masimba kunemapurisa ayo ane bato raanotsigira.
Mazuva ano mapurisa anosunga kana kubata munhu pasina kutevedzera mutemo zvakanaka sezvaitwa panguva yeRhodesia. Vatori venhau nenhengo dzemapato anopikisa Zanu (PF) vanogaro sungwa nemutemo wePOSA.
Zanu (PF) inoshandisa mitemo yakaipa kutyora kutonga kwematare edzimhosva ichiramba kuti vanhu vasunungurwa pamutemo vabude mujere ne mutemo weCriminal Law (Codification and Reform) Act.
Kubva mumazuva eGukurahundi muna1985 kupinda mumakore 1990, 1995, 2000, 2002, 2005 kusvika muna 2008 Zanu (PF) iri kurakasha vanhu sezvaiitwa nevatongi veRhodesia.
Maonero angu ndeekuti kuti tienda kuZimbabwe inerusununguko rwendo rwunorwadza. Maonero angu ndeekuti kuchava nekurohwa kwevanhu sezvo vanhu vava kusada hutongi hwavaMugabe musarudzo dzinenge dzisina mhirizhonga.
SeRhodesian Front, Zanu (PF) nemauto ayo inoratidza kuti inogona kudeura ropa kuitira kuti irambe ichitonga.
Chinangwa chekufananidza Zanu (PF) ne Rhodesian Front ndecheku yeuchidza bato rakarwa parusununguko kuti rarasika gwara uye harisina kodzero yekuramba richitonga.
Ndinoda kuyeuchidza zvekare vachiri muZanu (PF) vanehunhu kuti kuba nekurwira kutonga hakusimudzire upenyu hwevanhu asi hwevarikutonga chete.
Chinyorwa chino ndechekuyeuchidza mhuri yeZimbabwe tsaona iri pamberi uye kuti vagare vakagadzirira kuitira kuti pasava nekudeuka kweropa sezvaitwa panguva yeRhodesia apo ropa remhuri yeZimbabwe rakateuka kunyika dze Zambia ne Mozambique pamazuva ekupedzesera kweRhodesian Front.
Maonero aya anoedza kuratidza kuti Zanu (PF) yakarasa gwara reChimurenga. Vagukuchira kutonga kwechisimba uko kusiri iko kwakafirwa nevakawanda. Uku ndiko kutengesa kwepamusoro soro kwegwara reChimurenga.
ZACRAS statement on the licensing of community radio stations
Concern over the govt’s disregard for High Court order on unvaccinated church members